Kodiarana sandoka, kodiarana sandoka, kodiarana vita amin'ny aluminium - Hanvos
tombony kalitao akora manta Ny kodiarantsika dia vita amin'ny akora vita amin'ny aliminioma kalitao tsara indrindra eny an-tsena, miaraka amin'ny hery misintona kely sy fihenan'ny korosiana tsara. Nihatsara ny kalitao avy tamin'ny loharano ary narahina nandritra ny fizotrany. Fiambenana avo lenta dia mitazona mafy izy io, mampihena ny fironana amin'ny vatana rehefa mihodina, mampihena ny slip ary mihetsika, manana fahombiazan'ny asa tsara, ny freins azo antoka ary ny opération azo ovaina. Hery lehibe haingam-pandeha, tanjaka avo, dissipati hafanana mahery ...
Paramèteran'ny vokatra: Araka ny maodely fikirakirana Production Production: Material sandoka ： Aluminium SIZE (INCH) WIDTH HOLE PCD (MM) OFFSET (MM) Vita ny 19 8,0 ~ 11 5 100 ~ 150 -9 ~ 52 hosodoko. Brush / Polish / Chrome 20 8.0 ~ 12.5 5 100 ~ 150 -3 ~ 68 Hoso-doko.Brush / Polish / Chrome 21 8.5 ~ 12 5 100 ~ 150 -3 ~ 66 Doko.Brush / poloney / Chrome 22 9.0 ~ 12 5 100 ~ 139.7 -8 ~ 78 loko .Brush / Polish / Chrome tombony lehibe: (1) Fitaovana kodiarana: 6061 (2) fandefasana haingana: 1 herinandro ...
Ny orinasan-tsika dia mamokatra kodiarana alim-pito vita amin'ny maivana ary misy tanjaka be ampiasaina amin'ny fiara mpandeha sy kamiao mavesatra, mpanazatra, semi-trailer, fiara fitaterana entana mampidi-doza, fiara mifono vy, fiaramanidina.
Izahay dia mpamatsy orinasa maherin'ny 30 lehibe sy salantsalany any anaty sy any ivelany, toy ny FAW (Jiefang), DFAC (Dongfeng), FOTON DAIMLER, SAIC-IVECO HONGYAN, Sinotruk, XCMG, Sany, BYD, Yinlong, Yutong, Kinglong, Zhongtong ary CIMC. Manome toky izahay fa mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny vokatray.